२ डेपुटी गभर्नरको लागी ढकाल, भट्ट, ढुङ्गाना र श्रेष्ठ सिफारिस, कसले मार्ला बाजी ? « Artha Path
२ डेपुटी गभर्नरको लागी ढकाल, भट्ट, ढुङ्गाना र श्रेष्ठ सिफारिस, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा २ डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल गत मंगलबार सकिएको थियो । बर्तामान सरकार धर्मराइरहेको अवस्थामा सरकारले चाडो डेपुटी गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मंगलबार कार्यकाल सकिएको डेपुटी गभर्नरको लागी बुधबारसाँझनै सिफारिस भएको बुझिएको छ ।
१० अंकले ओरालो लाग्यो नेप्से, ८ अर्ब ४४ करोडको कारोबार
काठमाडौ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से १० अंकले ओरालो लागेको छ । यस दिन